१४ घण्टा लामो शल्यक्रियापछि बुनेको क्यान्सर अस्पताल बनाउने सपनाले लियो आकार
२०७६ पुष २१ सोमबार
काठमाडौं - ‘म जे गर्छु नेपालमै गर्छु' यही स्वलोगन बोकेर विगत लामो समय देखि मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् बी एण्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाई ।
निर्देशक प्रसाई केहि वर्ष पहिला क्यान्सर पिडित थिए । उनको जिब्रोमा क्यान्सर भएको थियो । उनि क्यान्सर उपचारका लागि भारत गएका थिए । जुन अस्पतालमा प्रसाई उपचारका लागी गएका थिए त्यस अस्पतालमा लगभग ४० प्रतिशत बिरामी नेपाली रहेको उनले बताए । उनि भन्छन् ‘उपचार र फलोअपका लागि भारतको अस्पताल जाँदा नेपालीहरुको बिजोक देखेँ ’, ‘जब म जिब्रो क्यान्सरको १४ घण्टा लामो शल्यक्रिया सकेर नेपाल फर्किए त्यसपश्चात नेपालमा नै क्यान्सर उपचार सम्भव बनाउँछु भन्ने सोच बनाइसकेको थिए । ,
‘मेरो जिब्रो क्यान्सरको शल्यक्रियाको लागी बिहान ७ बजे शल्यक्रिया कक्षमा प्रवेश गरेको थिए, मलाई एकैपल्ट बेलुका ८ बजे बाहिर ल्याइएको थियो । होसमा आउँदा पुरै घाटी काटिएको थियो, बोल्न मिल्दैनथ्यो छेउमै डाक्टर र छोरा थिए त्यतिबेला मैले कागजमा लेखेर भने अब म क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्छु ।’
आफ्नो जिवनका भोगाईबाट पाठ सिकेर मैले भोगेको पिडा अरुले भोग्न नपरोस, क्यान्सर उपचारका लागी कोहि व्यक्ति देश छाडेर अन्यत्र जान नपरोस् भन्ने सोचले उनले नेपालमा नै सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पताल बनाउने सपना बुनेका थिए । ‘उनि भन्छन् पैसा हुने त विदेशमा गएर उपचार गराउलान तर यहाँ कसैको सिटामोल किन्ने समेत क्षमता छैन, क्षमता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचमा औषधि उपलब्ध छैन । ’ ‘ विविध समस्याका कारण उपचारको पर्खाइमा बसेका व्यक्तिका लागि कसले सोचिदिने जो समयमै उपचार नपाएर मरेका छन् । ’
यिनै समस्यालाई निराकरण गर्न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रसाईले देखेको सपनाले आकार लिएको छ । उनले गतहप्ताको बुधबारदेखि देशकै ठूलो पुर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालबाट अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण सहितको सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
तर उनी देशको लागी राम्रो काम गर्दा पनि ‘मेडिकल माफिया’को उपनाम दिएकोमा दुखेसो पोख्छन् । उनि भन्छन् ‘आफुलाई पटक पटक माफिया भनियो, लेखियो, आफुले बुझे अनुसार अबौधानिक काम जस्तै हतियार, ड्रग्स बेचबिखन गर्ने, कालो बजारी गर्ने व्यक्तिलाई माफिया भनिन्छ । ’ तर मैले नेपालका बिरामीहरुलाई नेपालमा नै उपचार सम्भव गराउँन बैंकबाट ऋण लिएर अस्पताल निमार्ण गरेँ तर पनि म माफिया भए किन ? उनि प्रश्न तेर्साउँछन् ।
प्रसाई भन्छन् ‘ यो देश मेरो हो, नेपाली जनताको सेवा गरेर नेपाली आमालाई हसाउँनुछ । चाहान्थे युरोप, अमेरीका जस्ता विकसित मुलुकमा गएर रमाउन सक्थेँ तर म नेपाली जनताको दुख कम गराउने कोसिसमा लागेँ । ’
अस्पतालमा उपचार गराउँन आउँने सबै बिरामी सम्पन्न परिवारका हुदैनन् । कति बिरामीहरु उपचार खर्च तिर्न नसक्ने पनि हुन्छन् । त्यस्तो बिरामीलाई अस्पतालबाट भगाएको अनुभव समेत सुनाए ।
उनि भन्छन ‘ हरेक व्यक्तिको अगाडि सगरमाथा हुन्छ, चड्ने नचड्ने व्यक्तिको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । आफु सधैँ अफ्ठ्यारो बाटो हिड्न मन पराउने प्रसाईले बताए । ’
नेपालबाट बर्षेनि ७० लाख मानिस विदेशिन्छन् । ति मध्ये कोहि धन कमाएर फर्किन्छन् त कोहि बाकसमा बन्द भएर फर्किन्छन् । यहि पिडालाई बन्द गर्न २ लाख नागरिकलाई लाई रोजगारी दिने योजना बनाएको उनि भन्छन् ।
मेचि अञ्चलमा ३० लाख जनसंख्या भएता पनि एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएका कारण उपचार गराउँन सिलगुडि जादाँ पैसा लुटिने र उपचार गर्ने निहुँमा कतिपय चेली बलत्कृत हुने गरेको प्रसाईले सुनाए ।
उनले क्यान्सर उपचारको क्रममा कुनै पनि नेपाली अन्य देश धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता अस्पतालको शैय्यामा लिएका थिए । फलस्वरुप आज ४ अर्बको लगानीमा काठमाडौं बाहिर झापाको बिर्तामोडमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको स्थापना गरेका छन् । प्रसाईले ३०० शय्याको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दा पाँच वर्ष आगाडी ३०० शय्याको बी एण्ड सी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यो काम मेलै आफ्नो लागि गरेको हैन, यो काम मैले मुलुकका लागि गरेको हुँ उनले भने ।
क्यान्सरका कारण ६० प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० हजार मानिसको मुत्युको कारण क्यान्सर बनेको छ । विदेशतिर क्यान्सर लागेको पहिलो चरणमा नै पत्ता लगाउँछन् भने नेपालमा अन्तिम चरणमा मात्र क्यान्सर पत्ता लाग्छ । जसका कारण बाह्य देशहरुमा ३० प्रतिशत मानिसको मृत्यु क्यान्सरले हुन्छ भने नेपालमा ७० प्रतिशतको हुने पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. वीरेन्द्र यादवले बताए ।
डा. यादवका अनुसार क्यान्सर उपचारका लागि पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले देशकै सुविधा सम्पन्न एवं अत्याधुनिक मेसिनहरु भित्राएको हो। जब बिरामीहरु उपचार गर्न अस्पताल आउँछन निको भएपछि मुस्कुराएर घर फर्किन्छन् भन्नको लागि पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले "मुस्कुराउछन् नयाँ जिवन" भन्ने लोगे राखेको छ ।